I-India iyila i-Drone Aviation esebenzayo ukuze ikwazi ukuqhuba okuhle
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » I-India iyila i-Drone Aviation esebenzayo ukuze ikwazi ukuqhuba okuhle
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Umzi mveliso wedrone waseIndiya
Umnumzana Jyotiraditya Scindia, uMphathiswa wezoPhapho lwase-India, namhlanje uthe indima karhulumente itshintshile phantsi kobunkokheli be-Nkulumbuso u-Narendra Modi, kwaye isebenza njengesixhobo, hayi umlawuli, ejonge indlela entsha yobungqina obusekwe kubungqina Ukwenza imigaqo-nkqubo yeedrones.
Itekhnoloji yeDrone iya kuzisa abo bahlala elunxwemeni kwiziko lophuhliso.
Kukho izicwangciso zokusebenzisa iidrones kwimephu yeedolophana ezingamawaka eziya kuthi zenze ukuba umzi mveliso wedrone waseIndiya unyuse.
Kusetyenziso lwanamhlanje, iidrones ziya kusebenza ngokubonelela ngogonyo, okukhokelela kukonyuka kokuqhutywa kogonyo.
Ethetha ngeseshoni "kwiNkqubo yoLwazi loLuntu-yoLuntu," edityaniswe ngokudibeneyo yi-Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) kunye namaziko ophuhliso lwezemali (DFI) ngentsebenziswano neQonga lezoQoqosho leHlabathi, uMnu Scindia uthe iteknoloji Ukunyusa kubalulekile kwaye Itekhnoloji yedrone iya kuzisa abo bahlala elunxwemeni kwiziko lophuhliso. "Iidrones zidlala indima ebalulekileyo ekunxibelelaniseni abantu kubude nobubanzi belizwe," utshilo.
I-Indiya njengelizwe, utshilo uMnu Scindia, ngokubanzi ube ngumlandeli kwindaleko yoyilo okanye itekhnoloji. Eli lixesha lokuqala sijonge ekubeni ziinkokeli, utshilo uMphathiswa wezoPhapho.
Imithetho emitsha yedrone, ehamba kunye nexesha elincinci kakhulu kunye nesikimu senkuthazo esinxulumene nemveliso (i-PLI) yeedrones, inika ishishini elisakhasayo lemveliso yasekhaya amandla amakhulu. "Umyinge wama-40 epesenti wokongezwa kwexabiso kweli candelo unika ithuba elikhethekileyo lokuqalisa ngesiqhelo," utshilo uMnu Scindia.
Uye wakhankanya ukuba ukuze nayiphi na itekhnoloji iphumelele ifuna amanyathelo ama-3 - ubume bomgaqo-nkqubo, inkuthazo yenkxaso-mali, kunye nolwakhiwo lweemfuno. URhulumente wase-Indiya, uqhubeke wathi, phantsi koPhononongo lweeDolophana kunye neMephu ngeTekhnoloji ePhuculweyo kwiiNdawo zeLali (SVAMITVA) icebo lokusebenzisa iidrones ukwenza imephu kumawakawaka ezilali eziya kuthi ukunika ushishino lweedrone zaseIndiya amandla amakhulu.
I-Indiya ineendawo ekunzima ukufikelela kuzo kakhulu, kwaye iidrones ziya kusebenza ngokubonelela ngezitofu zokugonya, okukhokelela kukonyuka kwesitofu sokugonya, wongeze umphathiswa. "Urhulumente sele esebenza njengomthengi we-anchor ngokusetyenziswa kwezitofu kunye nokwenza imephu kunye nokudala ubume bemfuno yetekhnoloji ye-drone e-India," utshilo uMnu Scindia. Urhulumente usivumile Isikimu se-PLI seshishini leedrone siza kuzisa utyalomali olutsha kwaye sandise ingqesho eIndiya, utshilo umphathiswa. Uthe itekhnoloji ye-drone ikwiimbaleki kwaye wacela amaqumrhu oshishino ukuba ancede itekhnoloji iqale.
Umnumzana Rajan Luthra, uSihlalo weKomiti ye-FICCI yeeDrones kunye ne-Ofisi kaSihlalo-iNtloko yeeProjekthi eziZodwa, iReliance Industries, Ltd. uthe ezolimo lelinye lawona macandelo abalulekileyo eIndiya anamandla amakhulu emarike kunye nokusetyenziswa kweedrones kwezolimo. iya kuzisa izibonelelo ezibonakalayo kubalimi nakubantu abaqhelekileyo.
Umnumzana Vignesh Santhanam, iAerospace kunye neDrones, iQonga lezoQoqosho leHlabathi, uthe iidrones kufuneka ziqinise inkqubo yophando yezolimo ukuxhasa icandelo ngokunyusa imveliso kunye nokuxhobisa abantu basezilalini ukuze baphile ubomi obunqabisekileyo ngelixa belikhanyiso lesine lobuchwephesha be-IR.
Umnumzana Smit Shah, uMlawuli weNtsebenziswano, i-DFI, uthe, "Siyazamkela iinzame zoMphathiswa njengeqabane lakhe."